About Us - UJinan JCUT CNC Equipment Co, Ltd.
UJinan JCUT CNC Equipment Co, Ltd.
Ikhwalithi ephezulu, ubuchwepheshe obusha, ubuchwepheshe, insiza enhle yokuthengisa nokuthengisa
Itholakala eJinan, eSifundazweni saseShandong, eJinan JCUT CNC Equipment Co, Ltd. (JCUT-CNC) ibhizinisi eliphakeme lobuchwepheshe be-CNC elisebenzisa (ngokwezifiso) ifenisha yefenisha ye-CNC yokukhiqiza kanye nezixazululo zomkhakha wokusika we-CNC. Imikhiqizo yethu ifaka phakathi ukulayisha okuzenzakalelayo kanye nokulayisha umshini wokusika we-CNC, izinqubo ezine zokusika umshini wokusika i-cnc, umugqa womshini we-ATC cnc, umshini wezinkuni we-ATC cnc, imbobo yomshini we-ATC cnc, umugqa wokukhiqizwa kwephaneli yomnyango we-blister, umnyango oshelelayo we-ATC cnc umshini , umshini we-vacuum laminging, umshini wokuzenzekelayo onqenqemeni, imishini yokusika ye-vibration, njll. Inkampani ihlanganisa indawo yamamitha skwele ayi-15,000 futhi manje inamalungelo obunikazi angama-87. I-JCUT CNC yibhizinisi lokuthumela ngaphandle elihlanganisa isayensi, imboni kanye nokuhweba.
Iqembu lobuchwepheshe eliqeqeshiwe
Ithimba lobuchwepheshe eliqeqeshiwe likunikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme
Inkonzo ye-Star Butler
Insizakalo yekhwalithi yedayimane enezimpawu eziyisithupha ikuvumela ukuthi ungakhathazeki
Iqembu lokuthengisa elinamandla
Ukuthengisa okuqondile kwefektri, kususa izixhumanisi eziphakathi nendawo, intengo ishibhile
Iminyaka yesipiliyoni sokukhiqiza
Iminyaka engaphezu kwe-10 yemishini yobuchwepheshe ejulile yokuxazulula ukubekezelela / ikhwalithi iqinisekisiwe
Ifilosofi yenkampani: ikhwalithi ephezulu iyimpilo yebhizinisi, ubuchwepheshe obusha buyisisekelo sebhizinisi, ukuqamba izinto ezintsha kuyisihluthulelo sokuthuthuka kwebhizinisi, insizakalo enhle ngemuva kokuthengisa izowina imakethe ebanzi yenkampani. Inkampani inaka izidingo zamakhasimende, ibhekana namakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe, ngesisekelo sokulandela ikhwalithi, ingahlangabezana nokwenza ngezifiso kwamakhasimende nezinsizakalo zamasiko abantu ngokuya ngezimo zobuchwepheshe ezikhona, futhi ilandele inqubekela phambili yesayensi nobuchwepheshe bokulandela ukuthuthukiswa kwekhwalithi. Ngasikhathi sinye, ifaka imali eMnyangweni wokucwaninga nokuThuthukiswa kwesayensi nezobuchwepheshe, ithuthukise imikhiqizo emisha, futhi ihlinzeke ngempahla ephezulu kakhulu futhi ethuthukile ye-CNC emhlabeni jikelele. Njengamanje, imikhiqizo yenkampani yathunyelwa emazweni angaphezu kwe-100 futhi ithengiselwe eNyakatho Melika, eYurophu, e-Asia nakwezinye izifunda. Futhi ngekhwalithi yayo enhle kakhulu, ukusebenza kahle kakhulu kanye nensizakalo enhle ngemuva kokuthengisa ithole udumo ngamakhasimende.
Ngasikhathi sinye, ifaka imali eMnyangweni wokucwaninga nokuThuthukiswa kwesayensi nezobuchwepheshe, ithuthukise imikhiqizo emisha, futhi ihlinzeke ngempahla ephezulu kakhulu futhi ethuthukile ye-CNC emhlabeni jikelele.